ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဖိုချောင် - မီးဖိုချောင်များအတွက်ပလပ်စတစ်မျက်နှာစာများနှင့်ကောင်တာများ
ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဖိုချောင် - ထိုအလေ့အထများနှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်း
တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာတစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဖြေရှင်းချက်သည်အရသာနှင့်စတိုင်များအတွက်ဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်း endearing နှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို - ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဖိုချောင်။ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းတူ, ပလပ်စတစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ကြောင်းယင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။
ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဖိုချောင် - အကောင်းအဆိုး cons
ပလပ်စတစ်ဟင်းလျာများရတဲ့အရာတွေသို့မဟုတ်ဆိုရင်တော့ Matte တစ်ချောမွေ့အရောင်မျက်နှာပြင်ရှိသည်သောမျက်နှာစာအားဖြင့်အလွယ်တကူမှတ်မိကြသည်။ တကယ်တော့ဒီအချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အောက်မှာအစားအစာများအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုကျရောက်ပါတယ်။ ပလပ်စတစ်ဆိုတဲ့အချက်ကို - ကသာအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းသည်မျက်နှာစာ၏တူညီသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, ကကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ် - အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့, MDF ။ ကျွန်တော်လည်း "ပလပ်စတစ်" ဘုံသက်တမ်းကိုခေါ်ထားတဲ့သို့သော်အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်း, ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင်၏အသီးအသီးအမျိုးအစား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်။
PVC ရုပ်ရှင်။ အားသာချက်များကိုကွေး, တတ်နိုင်, စက်မှုပျက်စီးမှုမှစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ခုခံ၏လွယ်ကူခြင်းအပါအဝင်မျက်နှာစာ၏အလွှာပြုလုပ်ခြင်းကိုမဆိုပုံစံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများပါဝင်သည်။ သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းချက်ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်ယံပိုင်း၏မခိုင်မြဲပုံသွင်းစဉ်းစား။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, အရောင်ပစ္စည်းအစိုဓာတ်, အပူသည်းမခံပါ, ပိုမိုမှေးမှိန်လာသည်။
acrylic ရုပ်ရှင်။ အကြမ်းခံဖျင်, နေရောင်ခြည်မှခုခံပါဝင်သည်ရာ၏အားသာချက်များ (ညှိုးနွမ်းမပါ), ရေနှင့်ရေနွေးငွေ့သည်။ ထိုသို့သောပစ္စည်း oblitsevat နှင့် curly ပုံစံမျိုးစုံ facades နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိသည် - သင်ကဆန်မျက်နှာပြင်မရနိုငျသညျ, ကအမဲဆီ, ကျပ်ခိုးနှင့်အခြားညစ်ညမ်းမှုဆေးကြောဖို့ခက်ခဲသည်။ သို့သျောလညျးအမြားအပွားမြင့်ကုန်ကျစရိတ်ရပ်ပေမယ့်မျက်နှာစာ၏ခွန်အားကြောင့်ကျိုးနပ်သည်။
HPL- ပလပ်စတစ်။ underlying အပေါ်ယံပိုင်း Kraft စက္ကူဖြစ်ပြီး, thermoplastic ဖင်နိုလစ် resins impregnate လေ့ရှိတယ်။ မည်သည့် stylist ဦးတည်ချက်အတွက်ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ဘို့ဤပစ္စည်းလှပသောနှင့်လက်တွေ့အသုံးပြုမှု။ ခရမ်းလွန်အလင်းထိတွေ့တဲ့အခါမှာဒါဟာအရာရာမှအကြမ်းခံများနှင့်ယဉ်ပါးသည်ပြိုလဲသွားပြီမအလွှာပါဘူး, အရောင်မပြောင်းဘူး။ ယင်းအပေါ်ယံပိုင်း၏အားနည်းချက်များကိုအခြေခံအားဖြင့်ကသစ်ပင်သာ texture ကစားကြောင်းကိုခေါ်, သာချောမွေ့မျက်နှာစာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုပလပ်စတစ်မျက်နှာစာ၏အခြားအမျိုးအစားများထက်အများကြီးမြင့်မားစေနိုင်သည်။
ယွန်း။ ထိုသို့သောနားကြပ်မဆိုဒီဇိုင်းသော, မှုန်သို့မဟုတ်ရတဲ့အရာတွေမျက်နှာပြင်အတွက် configured နိုင်ပါသည်။ ယင်းအပေါ်ယံပိုင်း၏အားသာချက်များကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူထိုကဲ့သို့သောပြန်ပြီးဆယ်တင်နိုင်တဲ့ပျက်စီးသွားသောကြောင့်အရည်အသွေးတွေတစ်ကြွယ်ဝတဲ့ဒီဇိုင်း, မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အားနည်းချက် - ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်မျက်နှာစာ၏အလွန်မြင့်မားကုန်ကျစရိတ်ဖို့ sensitivity ကို။
ယင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ Matt သို့မဟုတ်ရတဲ့အရာတွေ option ကိုထုတ်လုပ်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးဖိုချောင်, အဘို့အင်္ကျီအများစုဟာအမျိုးအစားများ - တောက်ပြောင်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ပိုပြီးစတိုင်နှင့်ကြော့ Matt ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရှုသည်။ အရောင်များသည်ကဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး:
အစိမ်း, အဝါ, ပန်းခရမ်းရောင်, ခရမ်းရောင် - တစ်ပလပ်စတစ်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းဖန်ဆင်းအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူမလျော့နည်းလှပသောကြည့်အစားအစာ။ မှန်ကန်စွာအရောင်ဒီဇိုင်းအလှဆင်နှင့်အခြားမီးဖိုချောင်ပရိဘောဂကောက်လျှင်ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ဿုံ, ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းသို့ fit ။ ဒါဟာအတွင်းပိုင်းဝန်ဖို့မအရေးကြီးပါတယ် - မီးဖိုချောင်တောက်ပတဲ့အရောင်, ကူရှင်ချုပ်နှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်တစ်ဦးထက်ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်တန်ချိန်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏လျှင်။
မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြင်, အပေါ်ယံပိုင်းပလပ်စတစ်မျက်နှာစာအတှကျအသုံးပွုသောမီးဖိုချောင်, မည်သည့်အတွင်းပိုင်းအတွက်လှပလာပါလိမ့်မယ် - ခေတ်သစ်နည်းပညာများနှင့်ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်ခြေခေတ်မီအဆင့်မြင့်နည်းပညာသို့မဟုတ်စတိုင်ခနျးဖို့ဇိမ်ခံဂန္ထဝင်ကနေမဆိုဒီဇိုင်းကိုတစ် set ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
မီးဖိုချောင်များအတွက်ပလပ်စတစ်မျက်နှာစာ - ဒီဇိုင်း
တစ်မီးဖိုချောင်အတွင်းပိုင်းရွေးချယ်ခြင်း, ချက်ချင်းကြောင့်နားကြပ်ကြည့်ရှုမည်ကိုမည်သို့အထူးသဖြင့်မျက်နှာစာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်, ပလပ်စတစ်ကိုလည်းမည်သည့်စိတ်ကူးများကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
ဂန္ထဝင်ပလပ်စတစ်မျက်နှာစာ။ ဒီသဘာဝခင်းကျင်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုတတ်နိုင်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားအတုသစ်သား texture ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကနည်းပညာများကြိတ်နှင့်ပုံစံမျိုး၏အခြားမျိုးကွဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ခေတ်မီစတိုင်ပလပ်စတစ်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်ဦးချင်းစီ Locker နှင့်အလုပ်လုပ်ဧရိယာ၏ပုံစံ Ergonomics နှင့် spaciousness ၏ဤညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့် brevity ။ ဒါဟာလှပသောတောက်ပြောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ Matte အပေါ်ယံပိုင်းမျက်နှာစာနဲ့တူလှပါတယ်။
ပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ။ ပရိဘောဂမျက်နှာစာပိုကောင်းရတဲ့အရာတွေရွေးချယ်အလှဆင်တဲ့နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူအဖြူရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်အတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများအတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး, လူကြိုက်အများဆုံးဖြေရှင်းချက်များထဲမှလူမီနီယံဘောင်အတွင်းမျက်နှာစာဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်အလွန်စတိုင်ကြည့် - loop တစ်ခုချင်းစီ Locker ပုဒ်ဖြတ်။ ထို့အပြင်လူမီနီယံဘောင်သတ်မှတ် Bole လက်တွေ့ကျတဲ့စေသည် - သက်ရောက်မှုအပေါ်သို့ပလပ်စတစ်တံခါးများထောင့်ပျက်စီးခံရနိုင်ပြီး, လူမီနီယံအကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုတာရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်သောသူပလပ်စတစ်မျက်နှာစာကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ - ဓါတ်ပုံကိုပုံနှိပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကြီးမားတဲ့အာကာသဖြစ်ပါသည်, တစ်ပုံစံတွေနဲ့ပလပ်စတစ်စလောင်းများ coated ဆိုရင်တော့ Matte နှင့်ရတဲ့အရာတွေနိုင်ပါတယ်, သူတို့အညီအမျှလှပလာပါလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ခြင်း၏အကူအညီနှင့်အတူမီးဖိုချောင်ကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်:
တစ်ဦးချင်းစီ Locker တွေ decorating ။
မီးဖိုချောင်, တစ်ဦးရတဲ့အရာတွေပလပ်စတစ်များထုတ်လုပ်ဘို့, ကြောင့်လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုအသုံးပြုထားပြီး, Ultra-ခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်အမြင်အာရုံတိုးချဲ့နေရာမယုံနိုင်လောက်အောင်ရေပန်းစားသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအစုကိုသိသိသာသာအားနည်းချက်ရှိပါတယ် - တောင်စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုလက်ချောင်းများသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်အမြဲလှပသောကြည့်ရှုနိုင်အောင်, သငျသညျနေ့တိုင်းရှိသည်, သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုလုယူနှင့်ဖြစ်ကောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်နည်းနည်းလေးညစ်ညမ်းမှု, ဂရုတစိုက်မျက်နှာစာသုတ်။
ခွင့် ပလပ်စတစ် worktop မီးဖိုချောင်ဘို့အကြမ်းခံပလတ်စတစ် HPL တစ်အလွှာနှင့်အတူ coated chipboard သို့မဟုတ် MDF ပစ္စည်း, ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့သောမျက်နှာပြင်ဿုံဘတ်ဂျက် chipboard ကနေအထိနှင့်စျေးကြီး acrylic အဆုံးသတ်ရေး, မည်သည့်မျက်နှာစာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပလပ်စတစ်ထိပ်၏အားသာချက်များကိုအောက်ပါအရည်အသွေးတွေနေသောခေါင်းစဉ်:
ဒီဇိုင်းများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ။ မီးဖိုချောင်များအတွက်ပလပ်စတစ်ကောင်တာများသစ်သား, ကျောက်များနှင့်သဲ၏ texture အပါအဝင်မည်သည့်အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အိမ်ထောင်စုထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်။ ပလပ်စတစ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် capricious မရှိ, အိမ်သူအိမ်သားဓာတုပစ္စည်းပင်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့, သူ့ကိုမဆိုထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကောင်တာများ, နေအတွက်လည်းညှိုးနွမ်းပါဘူး။
ရေမှ sensitivity ။ ပလတ်စတစ်အပေါ်ယံပိုင်း အကယ်. (ထိုပူးတွဲစစ်ရေးအပေါ်ဥပမာ) ရေ worktop ရောင်ရရှိသွားတဲ့နှင့်လမျးစပျက်စီးကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Recovery ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြတ်တောက်မှုအားလုံးသည်အမျိုးမျိုး, ချစ်ပ်, ထိုကဲ့သို့သောကုတ်အင်္ကျီအဘို့အခြစ်မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ဖယ်ရှားပစ်လို့မရပါ။
ထိုကဲ့သို့သောမီးဖိုချောင်ပလတ်စတစ်များထုတ်လုပ်အတှကျအသုံးပွု Nouveau, ကျယ်ဝန်း, functional ဖြစ်စေလျက်, ဒီဇိုင်နာ၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုတတ်နိုင်သမျှများများအာကာသကယ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်အဖြစ်ခေတ်မီပရိဘောဂများ၏အများစု။ ထို့ကြောင့်အားလုံးထောင့်မီးဖိုချောင်၏အတွင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုမကြာခဏသေးငယ်တဲ့အာကာသအတွင်းအများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်း၏မျက်နှာစာတစ် radiused ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးလျှင်ထောင့်ပရိဘောဂ, အထူးသဖြင့်စတိုင်နှင့်ခေတ်မီလှပါတယ်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက် HPL အပြင်, ပရိဘောဂများအတွက်ပလပ်စတစ်ဖုံးနီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပလပ်စတစ် modular မီးဖိုချောင်
တစ်စုံတစ်ဦးကတည်ငြိမ်မှုအတွင်းပိုင်းထဲမှာအပါအဝင်အသက်တာ၌အရေးကြီးသောဖြစ်ပြီး, တစ်စုံတစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုမနှောမြော။ အတိတ်အလင်းပလပ်စတစ်ဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူစတိုင်ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ modular ပရိဘောဂအလွယ်တကူ interchanged နိုင်ပြီးဆိုနိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံမှန်အရွယ်အစားအတော်ကြာဗီဒို, ကြင်အလှဆင်နှင့်နှစ်ဖက်ပေါ်ပါဝင်ပါသည်။ အများစုမှာမီးဖိုချောင်ဒါပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကြသည် - တစ်ဦးချင်းစီ module တွေကနေ။
ဥပမာအားထက်သိသာအချိန်များတွင်ပလပ်စတစ်, ညစ်ညမ်းသည်အနည်းဆုံးသည်အခြားအစုံ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦး monochromatic မျက်နှာပြင်အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, မည်သည့်အစက်အပြောက်, အပင်တစ်ပင် texture, ကြောက်မက်ဘွယ်သောကွာရှင်း၌မိမိတို့ပုံမှန်အတိုင်းရေမြှုပ်ခဲသုတ်ဖို့ကြိုးစားမှုနှင့်အတူ coated ဟင်းလျာများ။ အဘယ်အရာကို tools တွေစုံလင်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရဖို့ပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင်ဘို့ဂရုစိုက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေဘဲနေရသနည်း
အဆိုပါအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် - တစ်ဦးအလင်းဆပ်ပြာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ပူနွေးသောရေကိုနည်းနည်းကလေးဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ဂျယ်လ်ပန်းကန်ဆေးစက်ဆပ်ပြာအရည်ပျော်သွားပါသည်။ ဒုတိယ option ကိုကမျက်နှာစာကနေလက်ဗွေရာကိုဖယ်ရှားအကြောင်းကိုပဲမပါလျှင်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့, သို့သော်လည်းအဆီတွေကိုဖယ်ရှားရန်။ တစ်ဦးအဆင်သင့်နည်းလမ်းမှာတော့ရိုးရိုးရေမြှုပ်နှစ်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအခြမ်းမျက်နှာစာနှင့်အတူကသုတ်, ထို့နောက်၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသူတို့အပေါ်မှာထွန်းလင်းအားမိုက်ခရိုမယ်။
ဖယောင်းင်အေးဂျင့် polishing အတွက်အသုံးပြုမရနိုငျ;
အင်တုံ, မီးဖို, မီးဖိုသန့်ရှင်းရေးအတှကျအရည်။
ဖျင်ခင်းကို တင်. ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မိမိလက်နှင့်ဥယျာဉ်ပြုပြင်ခြင်း - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးများ
မျက်နှာကျက် diode မီးခွက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ Ralph Fiennes
အမျိုးသမီးတွေ 40 နှစ်တာနွေရာသီအဝတ်အစား
သီးခြား power supply အဘို့အလိုက်ဖက်တဲ့အစားအစာစားပွဲပေါ်မှာ
မော်ဒယ်အဝတ် - ဂန္ထဝင် 2013
အိတ် - နွေရာသီ 2016